Mkpesa ndị ọrụ ịja mma nke 2019 | Hongli
2020/6/15, ụlọ ọrụ anyị enweela Nzukọ Mgbapụta Ọkwa Nlekọta nke 2019. N'oge ogbako ahụ, nke mbụ, onye isi anyị Mr.Xie chịkọtara mmezu nke afọ gara aga. Olu ahia nke igwe ngbanye ahihia abawanyela ma usoro ihe eji emeputa ihe a ma ama karie nka. N'afọ gara aga, ụlọ ọrụ anyị emeela nkwalite nke ọma na afọ a anyị na-eche ihe ịma aka ihu. N'ime ọkara afọ mbụ, ụlọ ọrụ anyị emeela mmemme nke igwe na-agbaze agbaze wee nweta ọfụma kachasị mma. Mana anyị kwesịrị ịchọpụta ọghọm nke mmemme ahụ wee bulie nkwalite.
Ka ọ dị ugbu a, ndị isi ụlọ ọrụ ihe omimi atọ na-ekwu okwu banyere atụmatụ ọrụ nke ogbako ọ bụla.
Mgbe ahụ, onye isi anyị jara ndị ọrụ pụrụ iche nke afọ gara aga mma. Onye ọ bụla enwetala asambodo nke nsọpụrụ. Asambodo a na-egosikwa mgbali ha mere n'afọ gara aga.
Odi nma, oru di nkpa n’oge ogbako a bu na ulo oru aka anyi guzobere. Ọ pụtara na teknụzụ nke ụlọ ọrụ anyị akwalitela nnukwu mgbasa ozi. Site n'enyemaka nke etiti teknụzụ, ikike ụlọ ọrụ anyị nwere ike imepụta ihe ọhụrụ. Mmepụta anyị ga-abụ nkwụsi ike ma nwekwuo mgbanwe.
N'ikpeazụ, ụlọ ọrụ anyị na-aja ndị ọrụ mma pụrụ iche nke sistemụ akwa igwe na-agbaze agbaze. Ndị ọrụ anyị agbaala mbọ dị iche iche n’oge mmemme a. Dịka ọmụmaatụ, mgbe anyị rere igwe, onye njikwa nke teknụzụ ọrụ ya na ọtụtụ ndị ọrụ ọzọ ga-aga ụlọ ọrụ ndị na-azụ ahịa iji nyere aka ịwụnye n'agbanyeghị. Site na mbọ ha, onye na-azụ ahịa na-ahọrọ igwe anyị.